Mararaa Guddinaa - Wikipedia
Mararaa Guddinaa (1956-) barsiisaa saayinsii siyaasaa fi hoogganaa garee mormituu Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFOti. Dr Mararaan umurii isaa guutuu waa'ee ummata Oromoof jecha qabsaa'aa kan dabarse yoo ta'u ammas paartii momituu hoogganuudhan siyaasa Itoophiyaa keessatti socho'aa jira.
2 Sochii Siyaasaa
3 Dirqamaan Soorama Ba'uu
Mararaa Guddinaa Adoolessa 5 bara 1956 godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaayee ganda Caancoo Obbiitti dhalatee guddate. Ijoollummaa isaarraa jalqabee waan isaaf hingalle cimsee gaafachuu fi waan sammuun isaa hinfudhanne hunda mormuu isaarraan kan ka’e maatii isaa fi namoota naannoo biratti maqaa masoo “Didaa” jedhamuun beekama ture. Oromoota muraasa yeroo sana carraa barnootaa argatan keessaa tokko yoo ta’u barnoota sadarkaa tokkoffaa achuma aanaa Tokkee Kuttaayee magaalaa Gooroo Sooleetti barnoota sadarkaa lammaffaa ammoo magaalaa Ambootti haala gaariin hordofuudhaan qabxii olaanaa galmeessisee Yuunivarsiitii Finfinnee seenuudhaan barnoota Saayinsii Siyaasaa hordofuu jalqabe. Haa ta’u malee carraan hidhamuu, dararamuu fi ajjeefamuu barattoota Oromoo irra ga’aa turee fi ga’aa jiru Mararaa Guddinaa irras ga’uu dhaan Mootummaan Dargii badii tokko malee mooraa barnootaa keessaa qabuudhaan waggaa torbaa oliif mana hidhaa keessatti isaan darare. Bara Jireenya isaanii keessatti abdii kutatanii kan hin beekne Dr. Maraa Guddinaa waggaa torbaa oliif badii tokko malee mana hidhaa keessatti dararamanii erga ba’anii booda gara Kaayiroo Ijiiptitti imaluudhaan barnoota addaan kutan itti fufanii Yuunivarsiitii Kaayiroo irraa barnoota Saayinsii Siyaasaatiin Digirii Jalqabaa fudhatan.
Barnootaaf bakka guddaa kan qaban Mararaa Guddinaa barnoota isaanii itti fufuudhaan bara 2002 yuunivarsiitii guddichaa fi beekamaa ta’e Yunversiitii Nezerlaandirraa barnoota Saayinsii Siyaasaatiin doktarummaa fudhatan.
Mararaan bara 1986 barsiisummaadhaan Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti tajaajiluu kan jalqaban yoo ta’u hanga ammaatti achumatti barsiisaa jiru.
Sochii Siyaasaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Dr Mararaa qabsoo Oromoo biyya keessaa bifa bittinnaa’een adeemsifamaa ture daandii qabsiisuudhaaf bara 1996 paartii Koongireensii Biyyoolessaa Oromoo hundeesse. Kunis qabsoo uummata Oromoof daandii haaraa bane. Sochii dinqisiisaa fi fudhatamaa ta’e uummata Oromoo waliin taasisuudhaanis filannoo bara 2005 irratti hojii guddaa dalaguudhaan uummatarraa jaalalaa fi amantaa guddaa argatan. Sababa kanaanis Oromiyaa bakka hedduu keessatti injifatanii mana maree Federaalaa seenuudhaan mirgi uummata Oromoo akka kabajamuuf cimsanii falmaa turan.
Haala kanaan moo'amuu fi uummata biratti fudhatama argachuu Mararaatti kan hin gammadne ADWUIn miseensota garaa isaanii guuttachuuf Koongirensii Biyyolessa Oromoo keessa seenan kanneen akka Tolasaa Tesfaayeetti qarshii muraasa hiixachuudhaan daandii godhatee shira hin jirre paartii kana keessatti uumuudhaan hundeessaa paartii kanaa kan ta’e Mararaan paarticha irraa fudhachuudhan paartiin uummata Oromoo biratti jaallatamee fi abdatame Koongireesiin Biyyoolessa Oromoo warra gantuuf dabarfamee kenname. Namoota kana godhan keessa tokko kan ta'e Tolasaa Tasfaayee akka hooganuufis angoon kijibaa ni kennameef.
Sochii godhan keessatti haala rakkisaa kam keessattis abdii kutatee kan hin beekne Dr Mararaan ammas adeemsa isaa itti fufuudhaan bara 2008/2009 paartii hayyuu diinagdee kan ta'an Bulchaa Dammaqsaatiin hundeeffame paartii Warraaqsa Federaalistii Dimokiraatawaa Oromoo(WFDO) waliin walitti makamuudhaan Koongiresii Federaalistii Oromoo (KFO) bifa haaraan hundeessanii qabsoo isaanii itti fufan. Paartii kana qabachuudhaanis uummata keessa gadi bu’anii qabsoo rincicee ture oo'isuudhan uummata dammaqsanii sochoosan.
Mirgi uummataa akka kabajamuuf halkaniif guyyaa carraaquu irraan kan hafe waa’ee jireenya dhuunfaa isaanii yaadanii kan hin beekne Mararaa Guddinaa hanga har’aatti mana hin qaban, maatii hin qaban, ijoollee hin qaban. Manni isaanii dachee Oromiyaa halkaniif guyyaa waardiyyaa dhaabbataniifidha. Maatiin isaanii uummata Oromoo hundadha, Ijoolleen isaanii Dhaloota Qubee of jalaan horatanidha.
Dirqamaan Soorama Ba'uu[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Mormituu mootummaa ta'uu Dr Mararaa kan hin jaalanne ADWUIn, Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti soo ammas dalaguuf humna qabuu osoo barattoota mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee biratti daran jaallatamuu yunrvarsiitii waggoota hedduudhaaf hojjaterraa tajaajilli kee dhumeera jechuudhan dirqamaan soorama akka ba'u godhameera. Seera yuunivarsiitii keessatti namni tokko hojjachuu nan danda'a jedhetti soorama ba'uuf kan hin dirqamne yoo ta'ellee, Yuunivarsiitin Finfinnee Mararaan dirqamaan soorama baaseera. Kana qofa miti tajaajjilli isaan waggoota hedduudhaaf biyyittii kana tajaajilan dagatamee manni jireenyaa waggoota hedduudhaaf keessa ta’anii biyyittii kana tajaajilan harkaa fudhachuudhan yeroo ammaa kana mana kiraatiif saaxilamanii jiru.
Waa’ee Dr Mararaa Guddinaa kana beektuu Laata? Dhihootti kan baname: Waxabajjii 19, 2015
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Mararaa_Guddinaa&oldid=37115" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 12 Haggaya 2021, sa'aa 21:29 irratti.